Ngwa 13 kachasị mma iji mepụta akara ngosi na ekwentị gị Gam akporosis
Taa metụ otu logos aka kama imepụta ha site na usoro nke ngwa nke ahụ ga - enyere gị aka ịnwe otu n’ime ihe sekọnd ma si otu ahụ nyekwuo agba na ndụ ka ọrụ, websaịtị, ụlọ ọrụ ma ọ bụ akara ga - ekwe omume.
Ka anyi mee ya na usoro ihe omuma a anyi nwere nke ụdị nile, site na nke kachasị mma na nke Adobe na-aga, ma ọ bụ ndị ọzọ raara onwe ha nye ịmepụta akara na mkpịsị ugodi ole na ole enyere na ihuenyo nke ekwentị anyị.
1 Ibis Agba X
2 Logo Maker - onye okike na onye mmebe
3 Palette - Wepụ eziokwu / doro anya na agba ọ bụla
4 Onye mebere Logo - Onye mebere ya, Onye Okike Ihe osise
5 Dppict - Mfe Pixel Arts
6 Adobe eweghara
8 Font ọsọ
9 Onu-ochu - Shopify Logo Generator
10 Akara Onye kere Plus
12 Logo Maker - Ihe osise eserese na ndebiri ndebiri
13 Akara Onye kere - Akara Ngwa Akara Kachasị Mma
Ibis Agba X
Anyị na ibis agba X anyị ga-eyikwasị uwe anyị niile iji ya 2.500 ihe, 800 Akara ókwú, 335 brushes, 64 nzacha na 27 agwakọta ụdịdị inwe ike ịmepụta akara ngosi pụrụ iche pụrụ iche. Yabụ, anyị na-ekwu okwu ebe a anyị agaghị enwe bọtịnụ iji mepụta akara ngosi wee nye ya agba, mana anyị ga-arụ ọrụ ntakịrị iji mee ka ọ pụọ iche ma pụta.
Logo Maker - onye okike na onye mmebe
Anyị nọ n'ihu oge a ọ bụ ihe ngosi mara mma mara mma nke mara ihe niile anyị nwere ike ịtụ anya ya nke ngwa nke udiri a. Shapesdị dị iche iche, agba, nzụlite, textures, akwụkwọ mmado na ihe eserese ndị ọzọ nke anyị nwere ike inye ya ụdị nke anyị ma ọ bụrụ na anyị mara otu esi agwakọta ha. N'ebe a, ihe a bụ ịmata otu esi ahọrọ ma jiri uru akpọrọ ihe masịrị anyị ka Logo Maker wee lekọta ndị ọzọ ma anyị nwere logitpo anyị dị njikere. Ọ nwere a free version, ma iji nweta ọtụtụ ihe na ya anyị ga-aga site na adịchaghị.
Developer: Iris Studios na Ọrụ
Palette - Wepụ eziokwu / doro anya na agba ọ bụla
Anyị na-eche ihu a ngwa yiri nke Adobe site n'inye anyị ngwa ọrụ anyị nwere ike iji maka ngwa ndị ọzọ. Nke ahụ pụtara, ọ bụ n'ezie na-ahụ maka iwepụta agba na igwefoto nke ekwentị anyị. Yabụ ọ bụrụ anyị na-ahụ agba na-amasị anyị na logo ma ọ bụ facade nke ụlọ ahịa Mgbe anyị jere ịgagharị, anyị nwere ike iji ngwa a lekọta wepụ ụda wee nye anyị uru chromatic na RGB n'onwe ya ka anyị were ya gaa ngwa mmezi foto ọzọ ma ọ bụ ọzọ iji mepụta logos na akpaghị aka. Ezigbo ngwa iji nweta agba ahụ.
Palette - Wepụta Agba
Developer: Ngwa PixelPerfect
Onye mebere Logo - Onye mebere ya, Onye Okike Ihe osise
Lee anyị bụzị n'ihu a mfe ngwọta n'ịwa okike logos ji obere mkpirisi igodo. Anyị na-amalite site na kwaaji efu kpamkpam iji tinye ihe ndị na-emepụta akara ngosi. Ngwa ahụ n'onwe ya na-enye anyị ụdị ọdịnaya dị iche iche dịka 100 ndabere, ntụgharị 3D, akwa, textures, ihe karịrị mkpụrụedemede ederede 100, yana faịlụ PNG nwere ike ịmepụta ya iji bulie ya na onyonyo ndị ọzọ mgbe anyị na-akpọsa ma ọ bụ na-ewepụta ọdịnaya maka mgbasa ozi. Ngwa nwere ihe nlereanya efu ya na nke adịchaghị na uru niile dị.
Developer: Egwu Z
Dppict - Mfe Pixel Arts
Anyị na-eche ihu a ngwa a raara nye imepụta pixelated nka ma ọ bụ nka a na-akpọ pixel art. N'ime ụfọdụ omume ọma nke akwụkwọ ntuziaka a na-ere ihe bụ pensụl nke na-egosi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe anyị ji mkpịsị aka na-ese ya, nke na-enye anyị ohere ịghọta nke ọma ebe anyị na pikselụ ndị ahụ ga-enwe ike idepụta akara ngosi nke mbụ na nke pụrụ iche. Ngwa dị ezigbo iche na ndị ọzọ ka ọ na-elekwasị anya na ịmepụta pikselụ maka akara ngosi, mana nke ahụ na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ụfọdụ okike na logos. Anyị nwere ike ịnweta ya free nlereanya na-akwụ ụgwọ otu maka ole na ole euro.
Nke a Adobe ngwa wepụtara afọ 6 gara aga, ọ bụ yiri nke dị n'elu iji wepụ agba site na foto e sere na mobile, ma na ihe dị iche nke zuo ezuo ọbụna inweta ụdị edemede nke akwụkwọ akụkọ ahụ anyị na-agụ ma ọ bụ nanị gbanwee agba agba nke ọdịda anyanwụ na agba agba. Ngwa anwansi nke ghọrọ ngwa pụrụ iche iji nwee ike nweta nsonaazụ ka mma mgbe anyị jiri usoro, gradients ma ọ bụ mkpụrụ akwụkwọ enwetara site na ya na ngwa ngwa ngwa ngwa ndị ọzọ. Ngwa nke ị gha egosiputa ka odi iche ma dikwa mkpa na ọkwa niile. Site na ndepụta kachasị mma dị ka ngwá ọrụ ma ọ bụ ngwa maka ndị ọzọ.
Adobe Capture: Ngwa nke Ps, Ai
Adobe Spark bụ onyinye Adobe maka mepụta ọdịnaya dị elu maka mgbasa ozi mmekọrịta na ndị ọzọ. N'ezie, eserese nwere ike ịmepụta nke anyị nwere ike iji maka njirimara. Họrọ foto, tinye ederede, tinye ihe nzacha nke ụdị dị iche iche ma ịnwere ike ịnwe akara ngosi pụrụ iche n'aka gị. Ọbụna emelitere ya ka ị nwee ike ịmepụta logos site na ịgbakwunye otu, ịhọrọ agba, na iji nchikota ederede. Ọ bụ ngwa pụrụ iche pụrụiche maka ikike ya iji mepụta ụdị ọdịnaya dị iche iche na anyị nwere ike iji maka ebumnuche ndị ọzọ dịka weebụsaịtị, netwọkụ mmekọrịta na ndị ọzọ. Ọ nwere usoro maka ụdị eserese niile, Ya mere, site na obere ndidi anyị nwere ike ịgbanwe ụlọ ọrụ nke anyị na-arụ ọrụ na aka nke bọtịnụ na mobile.
Adobe Express: imewe
Anyị na-eche ihu a logo generator nke nwere ihe kariri 200 ihe edemede akwukwo aha ya na ihe oyiyi 250 n’azụ iji jikọta amamihe ma mepụta akara ngosi n’oge adịghị anya. Dị mkpụrụedemede dị iche iche na-atọ ụtọ, ma ọ bụ ebe a ka aha ya si, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ akara ngosi ebe akụkụ bụ isi ya bụ ederede, Font Rush nwere ike bụrụ ngwa pụrụ iche iji wee see aha ụlọ ahịa gị. ma ọ bụ ọbụna edemede nke otu mgbe ahịa dị n'ime ya. A free ngwa na i nwere maka gị gam akporo mobile na usoro isiokwu a nke kacha mma logo kere ngwa.
Developer: Naanị Ntụrụndụ
Onu-ochu - Shopify Logo Generator
Shopify bụ otu n'ime usoro ntanetị kachasị ewu ewu Taa, ma nyekwaa ya akara iji mepụta akara ngosi nke mere na onye ọ bụla nke mepụtara akara ya na ikpo okwu ya, nwere ike itinye akara ngosi nke na-enye ihe edeturu ma jikọta ahụmịhe ahịa ha na onyonyo. Anyị na-eche ihu igwe na-emepụta akpaka zuru ezu na nke anyị nanị nwere ịhọrọ ụzọ maka Hatchful ngwa ime ndị ọzọ. Naanị anyị ga-ahọrọ otu na ihe dị iche iche iji nwee akara ngosi anyị nwere ike ibugo na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ naanị na weebụsaịtị anyị nke anyị mepụtara na Woocommerce ma ọ bụ usoro ntanetị ndị ọzọ.
Hatchful - Akara Generator
Developer: Zụọ ahịa Inc.
Akara Onye kere Plus
Anyị fọrọ nke nta na-ekwu na Logo Maker Plus bụ akpaka logo jenerato kasị ewu ewu na ndepụta ahụ, ya mere a na-etinye ya n'ebe pụrụ nnọọ iche. Anyị nwere ụdị dị iche iche eserese na anyị nwere ike ịgbakwunye na ọ bụrụ na anyị agawa akara ngosi ya kachasị mma, anyị nwere ike ịga na nnukwu ọbá akwụkwọ eserese sara mbara ma sara mbara iji nwee ike ịmepụta akara ngosi pụrụ iche nke anaghị edepụtacha. O nwekwara akụkụ a na - akwụghị ụgwọ maka otu ngwa ebudatara ụdị ngwa okike etinyere na Storelọ Ahịa Play na nke adịchaghị adịkarị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe pụrụ iche.
Ngosipụta ihe onyonyo Logo Maker Plus
Developer: Logopit - Onye kere Logo & okike Onye okike
Mụ na Canva anyị enweghị ngwa mkpanaka, ebe ọ bụ na nke furu efu n'amaghị n'ezie ihe kpatara ya ma ọ bụ ihe kpatara ya, mana anyị nwere ya na nsụgharị weebụ ya iji nweta ọbá akwụkwọ na-adọrọ mmasị nke ihe eserese na nchịkọta akụkọ oyiyi dị mfe ma dịkwa mfe. Anyị na-amalite na kwaaji oghere ịgbakwunye site na ịdọrọ ihe ndị ahụ anyị dị n'akụkụ aka ekpe site na edemede na ụdị eserese. Ngwa nke mmadụ niile maara nke ọma na ewezuga ịhapụ anyị ka anyị mepụta akara ngosi, ọ dịkwa mma maka ebumnuche ndị ọzọ dịka eserese maka netwọkụ mmekọrịta, foto na ọbụlagodi akara ngosi. Otu n'ime ihe kachasị mma na ndepụta maka ịmepụta akara ngosi pụrụ iche.
Logo Maker - Ihe osise eserese na ndebiri ndebiri
Ndị ọzọ free logo generator na-akpaghị aka na ọtụtụ narị puku nyocha Na na anyị nwere ike ikwu na ị na-eji na-ahụ ma ọ bụrụ na nke ọ bụla nke ndịna-emeputa na ọ na-enye n'efu nwere ike iji mepụta akara ahụ achọrọ maka ọrụ, ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Naanị anyị ga - ahọrọ otu ọdịdị ma ọ bụ akara ngosi ma bido ịhazigharị ya na nhọrọ dị iche iche ha nyere anyị. Ee, akara ngosi nwere ike enweghi ụkọ karịa, mana anyị so na ndị kachasị mma kachasị mma iji mepụta logos site na mkpanaka gị.
Imebe akara ngosi akara ngosi
Developer: Mobi App & Thumbnail Maker Inc.
Akara Onye kere - Akara Ngwa Akara Kachasị Mma
Aka na 10.000 + ndebiri ndebiri, edemede 40+ ọ na-ejikwa nchịkọta akụkọ dị mfe nke mere na n'ime usoro ole na ole anyị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ederede ọhụrụ nke anyị ga-eji. Mfe nke iji ya na nghọta ya emeela ka ọ na-eto ngwa ngwa ka ọ bụrụ onye na-achọ logo. O nweere gị ohere ịnụ ụtọ ugbu a.
Mepụta Logos na Eserese eserese
Developer: Ngwa Arcade ọdịnaya
Ndị a bụ ngwa kachasị mma iji mepụta logos n'efu site na mkpanaka gị wee si otú a tụgharịa na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị ma ọ bụ nke guzobere na ndụ n'ezie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ihe ngosi 13 kachasị mma maka gam akporo
Esi gbanwee ndabara nchọgharị na gam akporo